ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကောက်စ်ဘဇား ဒုက္ခသည်စခန်းက မွတ်စလင်မိသားစုကို တွေ့ရစဉ်
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာကဖိအားပေးရေး ဆော်သြစည်းရုံးမယ့် လှုပ်ရှား မှုကော်မတီတရပ်ကို အစ္စလာမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေက မနေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေ က ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒက္ကားမြို့မှာ နှစ်ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ OIC ခေါ် အစ္စလမ္မစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ညီလာခံကို တက်ရောက်လာတဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၅၃ နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ သံတမန်တွေက အဲဒိကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တာပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီ မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာ ၇ သိန်းလောက် ထွက်ပြေးလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အဆုံးသတ်ရေး ရှေးရှူဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်း OIC အတွင်းရေးမှူးချုပ် Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen က တိုက်တွန်းပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ အသိုင်းအဝိုင်းပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒီကော်မတီသစ်ဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Why OIC bring these Rohinga to their country. These Muslim refugees only like to stay in rich countries. Why rich Muslim countries offer Rohinga to stay in their countries.
May 07, 2018 01:32 AM